नेपाली भाषाको भविष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
नेपाली भाषाको भविष्य
वैशाख १४, २०७६ विष्णुमाया सिग्देल
चैत अन्तिम साता, मैले पढाउने एक निजी विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन हुँदै थियो  । एक विद्यार्थीले मेरो विषय नेपालीमा निक्कै राम्रो नतिजा ल्याएकी थिइन्  ।
चैत अन्तिम साता, मैले पढाउने एक निजी विद्यालयमा नतिजा प्रकाशन हुँदै थियो । एक विद्यार्थीले मेरो विषय नेपालीमा निक्कै राम्रो नतिजा ल्याएकी थिइन् । अभिभावकसँग खुसी बाँड्न पाउने आशा गरेकी थिएँ । छोरीको नेपाली विषयमा धेरै नम्बर देखेपछि उनी खुसी भएनन् । भने, ‘लौ नेपाली विषयमा पो राम्रो अंक आएछ । यो त सरकारी स्कुलजस्तो पो भो !’
मलाई नमिठो लाग्यो । सायद आफ्नै भाषा जान्नु पनि अभिशापजस्तो भयो, मेरो विद्यार्थीका लागि । नेपालीमा कम अंक आउनुको पछाडि अभिभावकको कम चासोमात्रै कारण होइन रहेछ । आफ्नै भाषालाई हेला पो गरिरहेका रहेछौं ।
केही अभिभावक मात्र नेपाली भाषामा छोराछोरी किन कमजोर भए भनेर चासो राख्छन् । यो प्रश्न गर्न थाल्नु नै समाधानको बाटोतर्फ लाग्नु हो । गहिराइसम्म नपुगी यसको समाधान भने सम्भव छैन । धेरैलाई यस्तो प्रश्न गर्ने फुर्सद पनि छैन । किन अंक कम आयो त नेपालीमा ? म पनि तत्काल अभिभावकलाई के भन्ने मनमनै सोच्छु । कुरो बुझाउन सजिलो छैन ।
नेपालीमा विद्यार्थीहरू परीक्षामा मात्र कमजोर भएका हैनन् । कति अभिभावक आफूहरूलाई नै नेपाली भाषा नआउने हुँदा मलाई सबैथोक सिकाउन आग्रह गर्छन् । नेपालीमा कमजोर हुनुको कारण अंग्रेजी मोह पनि हो । अधिकांश अभिभावक छोराछोरीले ‘साथी’ चलचित्रको हिरोले जस्तै अंग्रेजीमै मनका कुरा खोलेको देख्ने लालसा राख्छन् । आमाले सिकाएको भाषामा मनका कुरा खोल्न पनि नपाउने विचरा भएका छन्, हाम्रा छोराछोरीहरू ।
नेपाली बाहेक सबै विषय अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुनु नेपालीमा कम अंक आउनु एक प्रमुख कारण हो । सामाजिक जस्ता विषय पनि नेपालीमै पढाइ नहुनु पनि अर्को कारण हो । निजी विद्यालयमा नेपाली विषय बाहेक अन्य सबै विषय तल्लो कक्षाबाटै अंग्रेजी माध्यममा पढाउने गरिन्छ । जाने पनि नजाने पनि अंग्रेजी बोल्न बाध्य पारिन्छ । निरन्तर अभ्यासले अंग्रेजी भाषा मजबुत हुनु अनौठो भएन । हामी विद्यालय र शिक्षकहरूले नै नेपाली भाषामा बोल्न बन्देज लगाएका छौं ।
संसारकै सायद नेपालमात्रै यस्तो देश होला, जहाँ शिक्षामा आफ्नो मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषालाई हेय दृष्टिले हेरिन्छ । नेपाली साहित्य समृद्ध बनाउन पनि भाषाप्रतिको प्रेम चाहिन्छ । सायद पढेगुनेका अष्ट्रेलिया, अमेरिका जाने, नपढेका खाडी मुलुकै जानुपर्ने बाध्यताले गर्दा हामीे आफ्नो भाषा अर्थात् आफ्नो कस्तुरी नचिनेर भौंतारिँदैछौं । अरु थुप्रै भाषाजस्तै नेपाली भाषाको जग भनेको वर्णविन्यास, वाक्य गठन प्रक्रिया, शब्दभण्डार नै हो ।
यिनै सिकेका कुराहरूलाई सिलसिला मिलाएर लेख्नसके मात्र भाषा सम्प्रेषणीय हुन्छ । पहिले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नेपाली भाषा राम्रो हुन्थ्यो । कारण अंग्रेजी विषय बाहेक अरु सबै नेपालीमै पढाइन्थ्यो । अहिले सामुदायिक विद्यालयको नीति पनि परिवर्तन भएर नेपाली बाहेक सबै विषय अंग्रेजीमै पढाउन थालिएको छ । केही वर्षमै निजी स्कुलमा जस्तै सामुदायिकमा पनि नेपाली भाषा सिकाइ थप कमजोर हुने पक्का छ ।
नेपाली भाषा राम्रो भए के पाइन्छ त ? नेपाली पढाउने र सरकारी जागिरमा मात्रै होला सायद नेपाली भाषामात्रै जानेर पुगिने गन्तव्य । सहरिया समाज तथा धनीवर्गका लागि नेपाली जान्नुले कुनै अर्थ राख्दैन, जति अंग्रेजीले राख्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि कक्षा ३, ५ र ८ का विद्यार्थीको नेपाली भाषा सिकाइलाई उनीहरूको स्कुलको किसिम, लिङ्ग, जातजाति, भाषिक पृष्ठभूमि तथा भौगोलिक अवस्था, प्रदेशस्तर, उमेरगत अवस्था आदि पक्षहरूलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरेको छ ।
कक्षा ३ को नेपाली भाषा सिकाइ मूल्यांकनले बालबालिकाको लेखाइ र शब्दभण्डार भन्दा पढाइ र व्याकरणमा राम्रो सिकाइ उपलब्धि रहेको देखाएको छ । उमेरगत आधारमा हेर्दा ८ वर्षदेखि १० वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको नेपाली सिकाइ उपलब्धि राम्रो रहेछ । मेरो अभिभावकले भनेजस्तो सरकारी स्कुलमा नेपाली सिकाइ राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता पनि ठिक रहेनछ । अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा नेपाली सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखाएको छ । सामुदायिकमा समग्रमै सिकाइ कमजोर भएर हो कि? कारण खुलाइएको छैन ।
केही रोचक तथ्य पनि छ, अध्ययनमा । सबैजसो क्षेत्रमा केटीहरू पछाडि भए पनि नेपाली भाषा सिकाइमा केटाहरूभन्दा केटीहरू अगाडि छन् ।
भौगोलिक आधारमा हेर्ने हो भने हिमाली क्षेत्र पहिलोमा र पहाडी क्षेत्र दोस्रोमा पर्छन्, भाषा सिकाइमा । तर यी दुई बीचको अन्तर भने न्यून छ । पुछारमा पर्छ, तराई । विकास क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कक्षा ३ को पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सिकाइ उपलब्धि अन्यको भन्दा उच्च छ ।
जातजातिगत आधारमा बाहुन–क्षत्रीको नेपाली भाषा सिकाइ सबैभन्दा राम्रो छ । जनजातिको भाषा सिकाइ उपलब्धि दोस्रोमा परे पनि बाहुन–क्षत्रीभन्दा धेरै पछाडि छन् । दलितको नेपाली भाषा सिकाइ जनजातिभन्दा पनि कमजोर छ । अन्य समूह भाषा सिकाइ उपलब्धिमा पुछारमा छन् ।
मगर, तामाङ, थारु, लिम्बु भाषा मातृभाषा भएका केटाकेटीको नेपाली भाषा सिकाइ भने नेपाली नै मातृभाषा भएकाहरूको भन्दा राम्रो पाइएको छ । यस्तो रोचक तथ्य कक्षा ३ र ५ को हो ।५ कक्षाको नेपाली विषयमा पढाइ र लेखाइभन्दा व्याकरण र शब्दभण्डार सिकाइ राम्रो छ । विकास क्षेत्रगत रूपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अगाडि छ । त्यहाँका ३ र ५ दुवै कक्षाको नेपाली भाषा सिकाइ अन्य क्षेत्रको भन्दा उच्च छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सबैभन्दा पुछारमा ।
कक्षा ८ को २०७४ सालमा गरिएको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धि बारेको अध्ययनले भने प्रदेश नं ३ अगाडि देखाएको छ । प्रदेश नं २ सबैभन्दा कमजोर छ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ क्रमशः दोस्रो र तेस्रो राम्रो नेपाली भाषा सिकाइ हुनेमा पर्छन् । रोचक यो छ कि प्रदेश नं १ अर्थात् विकासमा अगाडि रहेको प्रदेशभन्दा विकासमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा राम्रो नेपाली भाषा सिकाइ हुनेरहेछ । नेपाली भाषामा राम्रो सिक्नु पनि विकास नहुनुको परिचय बनिसकेको त होइन ?
प्रदेश ३ मा के कारणले नेपाली भाषा राम्रो भयो भन्ने कुरा अन्य प्रदेशले थाहा पाएमा सुधारको थालनी गर्न सक्थे कि ?
आमाबाबुको पेसाले पनि बालबालिकाको नेपाली भाषा सिकाइमा ठूलो फरक पार्ने रहेछ । सरकारी जागिरेका छोराछोरीको नेपाली सिकाइ सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ भने खेतीकिसानी र घरायसी काम गर्नेको छोराछोरीको सिकाइ स्तर कमजोर छ । बाबुआमाको पेसाले छोराछोरीको नेपाली भाषा सिकाइ निर्धारण भइरहनु हाम्रो शिक्षाको स्तर कमजोर भएको प्रमाण हो । आमाबाबु नेपाली शिक्षक रहेको परिवारका छोराछोरीको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुँदोरहेछ ।
उमेरगत किसिमबाट उनीहरूको सिकाइ उपलब्धि हेर्दा १३ वर्षसम्मका बालबालिकाले नेपाली भाषा राम्रो सिकेका छन् । १४ देखि १५ वर्ष माथिका बालबालिकाको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धि घट्दो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तर अध्ययनले के कारणले यस्तो भइरहेको छ, खुलाएको छैन । बालबालिकाले माथिल्लो कक्षामा जाँदा बढी लेख्नुपर्ने, ह्रस्व–दीर्घ र सिलसिला मिलाएर लेख्नुपर्ने, कथा, कविता, नाटक, संवादहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
तर त्यस्तो सिकाउने अभ्यास राम्रो नहुनु तथा अभिभावकको पनि चासो कम हुनुले यस्तो भएको हुनुपर्छ । खस्कँदो नेपाली भाषा सिकाइलाई सुधार गर्न ढिला भैसकेको छ । शिक्षक वा विद्यालयले पढाएन मात्रै भन्न छाडेर अभिभावकहरूले शिक्षकसँग भेटघाट गर्ने सल्लाह गर्ने वा विश्लेषण गरेर हाम्रा नानीबाबुको भाषा सिकाइ सुधार्नु आजको आवश्यकता हो । बेलैमा हामी सबै मिलेर लागौं । माधव प्रसाद घिमिरेले रचना गरेको गीतकै लयमा भन्न चाहन्छु, नेपाली हामी रहौंला कहाँ भाषा नै नरहे ।
लेखक शिक्षिका हुन् ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:१२
श्रीलंकाको नयाँ जातीय तनाव
वेइयी काई, के के रेबेका लाल, अन्जली सिंग्वी
वैशाख १४, २०७६ न्यूयोर्क टाइम्स
गत आइतबार इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व इस्टरका दिन श्रीलंकाको राजधानीमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट भयो  । जातीय द्वन्द्वको लामो इतिहास भोगेको यो मुलुकको शान्तिलाई उक्त शृंखलाबद्ध विस्फोटले भंग गरिदिएको छ  ।
२००९ मा अन्त्य भएको दशकौं लामो गृहयुद्धको प्रमुख कारण बहुसंख्यक सिंहाली बौद्ध र अल्पसंख्यक तामिल समूह बीचको द्वन्द्व थियो । हालको विस्फोट अल्पसंख्यक इसाई धर्मावलम्बी लक्षित थियो । इस्लामिक स्टेटले यसको जिम्मा लिएको छ । श्रीलंकाको तनावपूर्ण इतिहाससँग यसको कुनै तादत्म्यता छैन ।
डेढ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको सिंहाली श्रीलंका बहुसंख्यक आदिवासी वर्ग हो । उनीहरू बौद्ध धर्म मान्छन् । उनीहरू टापु राष्ट्रको पश्चिम र दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्छन् । तामिलहरूले भने उत्तर र पूर्वी तटीय क्षेत्रलाई ओगटेका छन् । अल्पसंख्क तामिलहरूभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका सिंहालीहरू हात छ । शासनसत्ता पनि उनीहरूकै अधीनमा रहेपछि त्यहाँ गृहयुद्ध चर्किएको थियो । जून १९८० मा सुरु भएको थियो । सिंहाली र तामिल बीचको तनाव २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएसँगै मत्थर हुँदै गएको छ । केही वर्षयता सिंहाली बौद्ध समुदायमा रहेका कट्टर समूहले मुस्लिम विरुद्ध नयाँ हिंसा सुरु गरेका छन् । गतवर्ष सिंहालीहरूको समूहले मुस्लिमहरूको घर तथा पसलहरूमा आक्रमण गरेपछि सरकारले त्यहाँ संकटकाल नै घोषणा गरेको थियो ।
भिन्नै प्रकारको द्वन्द्व र तनावले गाँजेको श्रीलंकामा आइतबारको विस्फोट त्यहाँको द्वन्द्वको इतिहाससँग विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । कहीं कतै नसुनिएको कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह, नेसनल थोहिथ जमातले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको सहयोगमा ऊक्त आत्रमण गरेको श्रीलंकाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘स्थानीय मुस्लिम समुदायको त्यहाँका इसाईहरूसँग कुनै मतभेद छैन । उनीहरूको द्वन्द्व केवल बहुसंख्यक बौद्धसँग हो,’ दक्षिण एसियाको राजनीतिक तथा सैन्य क्रियाकलापका विज्ञ तथा जर्जटाउन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सी. क्रिस्टिन फेयरले भनिन् । यस अघिसम्म उक्त कट्टरपन्थी मुस्लिम समूह बुद्धका मूर्तिहरू तोडफोड गर्नेहरूको जमात भनेर मात्रै चिनिन्थ्यो । ‘आइतबार मारिनेमा अधिकांश इसाई धर्म मान्नेहरू छन् । उनीहरूको श्रीलंकाको मुस्लिम समुदायसँग कुनै वैमनस्यता नै थिएन,’ फेयरले भनिन् ।
नयाँदिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट फर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कार्यकारी निर्देशक अजय सहानीका अनुसार मुस्लिमहरूसँग कुनै द्वन्द्व नै रहेको इसाई समुदायमाथि लक्षित यति ठूलो आक्रमणमा विश्वभर आफ्नो सञ्जाल फैलाउँदै लगेको इसाई विरोधी मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूको हात रहेकोमा कुनै शंका छैन । आक्रमणको दुई दिनपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्फोटको जिम्मा लिएको इस्लामिक स्टेटको समाचार एजेन्सी ‘अमाक न्युज’ ले आक्रमणमा संलग्न आठजना लडाकुहरू ‘इस्लामिक स्टेटका योद्धा’हरू रहेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थियो । आक्रमणमा संलग्न सबै श्रीलंकाली नागरिकको इस्लामिक स्टेटसँग सम्बन्ध रहेको सो भिडियोमा देखाइएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ ०८:०९